Indlela yokufumana umkhondo we-GPS okanye isixhobo sokumamela kwiimoto | I-Singapore ephezulu ye-GPS ye-GPS Tracker ye-Autism / ye-Autistic yabantwana kunye neDementia yabantu abadala
Inkqubo yokuma komhlaba yehlabathi (GPS) kunye nezixhobo zokumamela zizinto ezincinci ezinokukunceda ukuba ujonge abanye ubomi ngaxeshanye abo banokubabambezayo banokubasebenzisa ukuba bahlole nawe. Ezi zixhobo zenzelwe ukuba zincinci kangangokuba zingafihlwa ngokulula ngaphakathi okanye ngaphandle kwemoto ngaphandle kokufumana ingqalelo yomntu ekujolise kuye. Idlala indima yeTrojan Horse apho utshaba lwakho lufumana uhlaziyo olupheleleyo lwentshukumo yakho kungekuphela nje kwindawo yakho, kodwa bemamele nento uthetha ngayo, uthetha nabani, zeziphi izicwangciso zakho zekamva ngomsindo izixhobo zokumamela. Ke, ukuze uqiniseke ukuba uya endaweni yakho ngaphandle kokulandelelwa okanye ukuphatha izixhobo zokumamela ezifihliweyo, qiniseka ukuba ujonga izinto ezichazwe ngezantsi njengoko ziya kwenza naziphi na izixhobo zokwenza umkhondo ezibonakalayo okanye ezingabonakaliyo njengeGPS kunye nezixhobo zokumamela ziphakama emehlweni akho ngokukhawuleza okukhulu.
I-SPY yeCRF Signal Detector:
Isixhobo sokuqala onokuthi ujonge kuso yi-SPY Camera RF yesitshixo somqondiso. Imveliso yokuyila emangalisayo ekuncedayo ukuba ungafumani nje umkhondo we-GPS nje kuphela kodwa kunye nezixhobo zevidiyo ngaphandle kwamacingo kunye nezixhobo zokumamela audi. Kulula ukuyithwala, ke uya kuyithenga enye uze ugcine kunye nawe emotweni ujonge imoto yakho rhoqo. Ukongeza kuloo nto iza nebhetri ye-1500 MAH eyenza ukuba esi sixhobo sisebenze iiyure ezili-15 ngqo, ngenxa yoko akuyomfuneko ukuba ubeke intlawulo kwesi sixhobo ngalo lonke ixesha. Inayo i-alam eyakhelweyo eya kuthi isebenze xa ifowuni ikufuphi ne-GPS tracker, ikhamera efihliweyo okanye izixhobo zokumamela. Uluhlu oluqhutywa rhoqo linokuthi yi-1MHZ UKUYA kwi-8000MHZ ephantse ichaze nayiphi na ibug kwisithuthi sakho.
I-SPY yeKhamera yeDig Detector
Le mveliso inokukwenzela imisebenzi emininzi, inokufumana amaza erediyo, imagnethi eyomeleleyo, ikhamera efihliweyo okanye iikhamera ezingenazingcingo. Sisisixhobo esigcweleyo esinokukunceda ufumanise ukuba imoto yakho ibhugi okanye hayi. Inokusebenza okulula, nabani na angasebenzisa le mveliso ngokulula kwaye kulula nokuyithwala unokubeka oku emotweni okanye ugcine ephaketheni lakho. Inesandi kunye nesandi eshukumayo kuthetha xa uphanda izixhobo zokuhlola, kwaye unokukhetha phakathi kwendlela yesandi okanye yintshukumo, iya kusebenza ngokwendlela xa ufika kufutshane nezixhobo zokuhlola.
(I-SPY999): Efihliweyo yokuCofwa kweKhamera ye-Spy-Spy
Le mveliso yobungcali imangalisayo inomtsalane, inomgaqo oguqukayo kwaye inokulandela umkhondo wezixhobo kuluhlu olukhulu. Inesitshixo sokutshintshela kuphela kunye nokuqonda okwenza ukuba kube lula ukusebenzisa imveliso, inokufumana zonke iintlobo zezixhobo ezifihliweyo njengeekhamera ezifihliweyo, umkhondo we-GPS kunye nezixhobo zokumamela. Xa ujonga imoto yakho esi sixhobo sikunika enye yeempawu ezintle esinazo, isalathiso sokukhanya esiya kukuxelela amandla e-ishara ukuze xa usiya kwezi zixhobo zokuhlola uzokubonisa indlela elungileyo kwaye inenkqubo yealam njenge kakuhle iya kuqala ukukhala xa ufika kufutshane nasiphi na isixhobo sokufihla esifihliweyo. Ngaphandle kwalonto, inebhetri ye-800 mah ekunika ubomi bebhetri ukuya kuthi ga kwiiyure ze-15, ngenxa yoko akuyomfuneko ukuba uzixakekise ngokutshaja ngalo lonke ixesha.
Ukuqukumbela, kufuneka sikhusele ubumfihlo bethu ekuhlaselweni kwabanye, kwihlabathi apho itekhnoloji iqhubela phambili imihla ngemihla abantu bafumana iindlela ezimbi zokusebenzisa ezi zinto zeli xesha lethu kwaye yiyo loo nto eli nqaku likubonisa ngeendlela ezahlukeneyo ongazisebenzisa Ukukhusela indawo yakho yangasese kubantu abakhohlakeleyo.
5859 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-14 Namhlanje